Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny Turkish Airlines dia mandefa ny serivisy ho any amin'ny toerana faha-52 misy azy atsy Afrika
Ny Turkish Airlines, manidina amin'ny toerana maro any Afrika noho ny orinasam-pitaterana an'habakabaka hafa, dia manamarika zava-bita iray hafa amin'ny fanitarana iraisam-pirenena amin'ny fanombohana sidina mankany Freetown, renivohitr'i Sierra Leone.
Miaraka amin'ny serivisy efa misy any amin'ny tobin'ny tanàna any Accra, Lagos, Bamako, Conakry, Dakar, Abidjan, Cotonou, Douala, Yaounde, N'Djamena, Ougadougou, Niamey, Cape Town, Johannesburg ary maro hafa, ny Turkish Airlines dia manampy sidina mankany Freetown ankehitriny ho any amin'ny laharana faha-52 any Afrika.
Manomboka anio, ny Turkish Airlines dia hiasa ny sidina Freetown in-2 isan-kerinandro amin'ny talata sy asabotsy.
Ny serivisy dia hanome rohy misy eo amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Istanbul Atatürk sy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Lungi amin'ny alàlan'ny Ouagadougou.
Fotoanan'ny sidina Freetown araka ny fandaharam-potoanan'ny 24 febroary.
TK 533 Talata, ary Sabotsy IST 18:00 OUA 22:00
TK 533 talata ary sabotsy OUA 22:50 FNA 01:10 +1
TK 534 Alarobia ary Alahady FNA 02:05 OUA 04:15
TK 534 Alarobia ary Alahady OUA 05:25 IST 14:30
* Ao amin'ny LMT ny fotoana rehetra.